Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana | Kwayedza
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana
13 Apr, 2018 - 00:04	 2018-04-12T19:31:10+00:00 2018-04-13T00:00:22+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndinotenda makaita basa, ndakawana wandaida. Ndinoti vose vachiri kufona pa0734 918 964 chiregerai henyu ndakamuwana.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35, ndinoda mudzimai ane makore 20 kusvika 32. Nhare yangu iyo 0779 666 109.
Makadini? Ndiri murume ane makore 33, ndoda mukadzi wekuroora anoda zvemba ane makore 20 kusvika 29 ari pamushonga. Ndinobatika pa0782 376 688.
Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0779 098 897.
Ndiri murume ane makore 32, HIV negative uye ndodawo musikana ane makore 19 – 25 asinawo chirwere, ari pachokwadi. Ndinoshanda muHarare, anoda ngaandibate pa0719 803 520.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, HIV positive uye ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore ari pasi peangu ari pachirongwa. Nhare yangu 0779 078 566.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo mukadzi wekugarawo naye ari pachokwadi ane makore 25 kusvika 30. Andifarira ngaandibate pa0785 457 542.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 50 anoshanda asiri pamushonga. Ndine vana 2, andifarira ngaandibate pa0718 797 752.
Makadii veKwayedza? Ini ndine makore 28, ndinotsvagawo mukadzi kana musikana ane makore 24 zvichidzika akazvipira kuongororwa ropa. Anoda taura neni pa0773 399 829.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 24 zvichidzika chero ane mwana 1. Nhamba dzangu 0784 981 358.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndogara muHarare. Ndiri kutsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 -25 ari HIV negative. Nhare dzangu 0776 888 475.
Makadii henyu? Ini ndiri mukadzi ane makore 25 okuberekwa nemwana 1. Ndinotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 35, ndinogara kuKaroi asi anoda zvekutamba kwete, ndapota hangu. Ari pamushonga kwete, zvakawanda tozotaura pa0777 675 346.
Ndiri murume ane makore 37, ndinoda mudzimai ane makore ari pasi pe27. Ndinoda anogara kuUMP, nhare yangu 0776 319 246.
Makadii veKwayedza? Ini ndinonzi Julliet, ndiri kutsvagawo mapenpals ekutaura nawo. Ndiri Form 3 paAssisi High uye ndogara kuChitungwiza. Nhare yangu 0718 513 991.
Ndiri murume ane makore 40, HIV negative uye ndine mhuri yangu. Ndotsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane mhuri yakewo. Ari muHarare kana padhuze ngaandibate pa0716 051 103.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 36, HIV positive uye ndotsvakawo mukadzi wekuroora ari pamushonga seni asingaradzike nekuti handiratidzikewo. Ngaave asina mwana anoendawo kubasa uye achitya Mwari. Ane makore 19 kusvika 24 andifarira ndibate pa0715 282 817.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri murume wemakore 39 ndinotsvagawo shamwarikadzi (penpals) kubva pamakore 25 kusvika 45. Vanoda ngavandibate pa0714 146 110.
Ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume, andida anondibata totaura zvizere pa0771 788 816.
Makadii? Ndiri mukomana anotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 19 anogara muHarare. Zvakawanda tozotaura, andifarira ngaandiabte pa0715 403 914. Ndiri muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35, nemwana 1 uye ndiri pamapiritsi. Ndinodawo murume ari pachokwadi kwete vane vakadzi, ndapota hangu. Nhare yangu 0776 462 582.
Ndiri mukomana akanaka mutsvuku, ndodawo musikana mutsvuku akasimbawo zvishoma kunyanya wekwaMurehwa. Nhare yangu 0713 753 954.
Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo shamwarirume iri pachokwadi. Andifarira ngaandibate pa0782 623 198.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20, ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 20 akapasa O-Level kana A-Level. Anoda ngaandibate pa0718 969 048.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mudzimai ane mwana 1 kana asina ane makore 23 kusvika 30 anoda zvekuroorwa. Ngaave ari pamushonga, anondibata pa0716 812 495.
Ndinotenda nechirongwa chino, ndakawana daddy ndava navo saka vese vaifona pa0713 439 603 ngavachirega havo.
Makadiiko? Ndiri murume ane makore 26, ndotsvagawo musikana ane rudo ane makore 20 zvichidzika wekuManicaland. Nhare yangu 0773 055 958.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 20, ndotamba soccer. Ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 zvichidzika asina chirwere uye anofarira bhora. Nhare yangu 0774 225 353, ndatenda.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana akanaka pachiso zvose nemwoyo ane makore 24 – 25 asiri pamushonga uye asinganwi doro. Ndaneta nekutambisirwa nguva nepfambi. VemuBindura kwete, ndinoshanda pabarber. Kana pane anondida ngaandibate pa0712 003 308.
Ndiri musikana ane makore 20, ndinotsvagawo murume ari serious wekurorwa naye. Andida ngaandibate pa0784 179 420.
Ndiri murume ane makore 39, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 36 ari pachokwadi nekuda imba. Anodawo zvekuchechi, akavimbika ngaandifonere pa0771 850 590.
Ndiri mukadzi ane makore 41, ndotsvagawo murume ane mazirudo ane makore 47 kusvika 55. Ndoshanda, anoda nhare yangu 0717 533 962.
Ndiri murume ane makore 30, ndinodawo mukadzi ane makore 20 kusvika pa30. Nhare yangu 0774 957 755.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana vatatu, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo murume ane makore 30 kusvika 37. Andifarira ngaandibate pa0776 520 446.
Ndiri pakutsvagawo mudzimai anoda zvemba asina chirwere. Ndine makore 32, ndinoda ari pachokwadi. Anoda nezvangu nhare dzangu 0774 705 725.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 nemwana 1, ndinoshanda uye ndinotsvagawo murume ane makore 39 – 45 ane mwana 1 kana 2. Ngaave anoshanda, anogeza uye asiri pamushonga. Ndiri muHarare, nhare yangu 0718 805 139.
Makadii henyu veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 25, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 21. Ndinoshanda, andifarira ngaandibate pa0783 953 025.
Ini ndiri mukadzi ane makore 50 ndotsvagawo murume ane makore ari pamusoro peangu. Ndine vana 3 vakura. Ndogara muHarare, andida anondibata pa0734 518 284.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 26. Andifarira ngaandibate pa0774 963 711.
Makadii vechirongwa? Ndinotenda nechirongwa chenyu, makaita basa ndokumbira vachiri kufona pa0779 299 131 vachirega nekuti ndakazomuwana wandaida.
Ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa, ndinotsvagawo shamwarikadzi yekufambidzana nayo ine makore 18 kusvika 25. Anoda ngaandibate pa0775 378 540.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana vaviri. Ndinotsvagawo murume ari kuda zvemba. Andifarira ngaafone pa0778 931 842.
Ndiri mukomana ane makore 33, ndoda musikana ane makore 30. Anoda ngaandibate pa0737 923 217.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3, ndotsvagawo murume ane makore 39 – 45 anogara muHarare. Zvakawanda tozotaura, anoda ngandibate pa0737 948 330.
Munofara here veKwayedza? Ini ndinofara chose. Ndiri kutsvagawo musikana wekudanana naye, akavimbika anotya Mwari. Ngaave ane makore 18 – 23. Nhare yangu 0738 328 629.
Ndiri murume ane makore 54 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 37 kusvika 43. Anondida anondibata pa0784 440 666.
Ndiri mukadzi ane makore 38 nevana 2, ndinotsvagawo murume asina mukadzi ari pachokwadi.
Ndiri pamushonga asi hazviratidzike saka andifarira ngaandibate pa0713 926 603.